Zọ Ndị Ọzọ Na-aga Ọdụ Ohaneze na Kadikoy | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulRozọ ndị ọzọ na-ebugharị na bọs ọha na Kadikoy
08 / 11 / 2019 34 Istanbul, IETT, General, Ụzọ Awara Awara, oru, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey
Routezọ ọzọ na-aga kadikoyde iett bus
Obodo isi obodo Istanbul, Kadikoy Gen. Şahap Gürler Street malitere ọrụ okporo ụzọ ahụ n'ihi ụzọ ọzọ maka ụgbọ ala ndị IETT mepụtara. A na-atụkwasị ebe ndị ọhụrụ na Ayrılıkçeşmesi iji gbochie ndị Istanbul ịkpa ọjọọ.
Kadikoy Gen. Sahap Gurler Street, Marmaray imechi uzo bu nke ana aru oru. A ga-eme mkpebi mkpebi okporo ụzọ, ationgbọ njem na okporo ụzọ (UTK) maka okporo ụzọ maka ụbọchị 180. Obodo isi obodo Istanbul emeela ụzọ ndị ọzọ maka bọs na mmechi nke ụzọ IETT ji eme ihe.
AKWESKWỌ AKWTERKWỌ AKW FORKWỌ AKW FORKWỌ FORBỌCH I
N'oge ọrụ, 56 IETT akara 507 ụgbọ ga-agafe Behiçbey Street na njem 2 puku 578 kwa ụbọchị. Na nke a, Haydarpaşa Bridge, nke na-arụ ọrụ dị ka otu ụzọ, ga-arụ ọrụ na ụzọ abụọ na warara nke uzo ga-erukwa na uzo nke Kadıköy.
Behiçbey Street, nke na-eje ozi ugbu a dị ka okporo ụzọ abụọ, ga-eji dị ka otu ụzọ. Ọpụpụ Kadikoy ga-anwa ibelata njupụta nke okporo ụzọ.
N'oge ọrụ ahụ, a ga-atụkwasị ebe ọhụrụ ahụ Ayrılıkçeşmesi Station kama Hamza Yerlikaya nkwụsị.
Gen. Şahap Gürler Street, 11 November 2019'da 180'da ga-emechi emechi maka ụbọchị.
IETT Buses na akwụkwọ mmado nke IETT Football Team…
İETT Otobüslerine Alternatif Güzergah
Ogwe Isi Iyi Mmiri
Hamza Yerlikaya durağı
Kadıköy Orgeneral Şahap Gürler Caddesi
Kadıköyde İETT Otobüslerine Alternatif Güzergah
Ihe ọmụmụ Marmaray